जेठीलाई पागल भन्ने,कान्छीलाई अपार्टमेन्टमा राख्ने अनि पत्नी पीडित बन्ने ?::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | बुध, मंसिर ८, २०७३
जेठीलाई पागल भन्ने,कान्छीलाई अपार्टमेन्टमा राख्ने अनि पत्नी पीडित बन्ने ?
मंसीर ६ काठमाण्डौं । आफूलाई मिडियामा पत्नी पीडितको रुपमा देखाउदै यस्तो संघको अध्यक्ष नै भएका शकंर ज्ञवालीले जेठी श्रीमतिलाई पागल भन्दै श्रीमति पीडित रहेको बताउदै ढाटेर गैर कानुनी रुपमा दास्रो श्रीमति बिहे गरेर अपार्टमेन्टमा राखेको खुलेको छ । हंसरा ७ गुल्मीका ज्ञवाली ५५ सालमा बिबाह बन्धनमा बाधिएका थिए । उनले बिहेको एक वर्ष पछि नै श्रीमतिसगँको सम्बन्ध विग्रिएको र आफू पीडित भएको आरोप लगाए पनि वास्तविकता भिन्न देखिन्छ ।
रमा पन्थी नामकी युवतीलाई बिहे गरेर उनले भैसेपाटी स्थित जनता आवासको जी २४ अपार्टमेन्टमा २वर्षदेखि राखेको खुलेको छ । पन्थीबाट एउटा बच्चा समेत पैदा भएको ज्ञवालीकै नातेदारले देवीलाई सूचना दिएको बुझिएको छ । उनीहरुले सिभिल या ओम अस्पतालमा बच्चा जन्माएको बताईएको छ ।
जेठी श्रीमति देवीलाई माना चामल समेत बेरोजगार रहेको भन्दै नदिएका ज्ञवालीले कान्छी श्रीमतिलाई अपार्टमेन्टमै राखेर खर्च गरीरहेको भेटिएको हो ।
पहिलो श्रीमति देवीबाट पिडित भएको भनी डिभोर्सका लागी अदालतमा मुद्धा हालेका ज्ञवाली बिरुद्ध अदालतमा उल्टै श्रीमतीमाथि घरेलु हिंसा गरेको प्रमाणति भएको थियो ।
उनले नाबालक छोरोलाई समेत जबरजस्ती खोसेर लगेका थिए ,आमाले उनमाथि पनि अत्याचार गरेको आरोप लगाए । छोरालाई भेट्न समेत दिएनन् । त्यतिमात्र हैन उनले श्रीमतिलाई मानाचामल स्वरुप दिनुपर्ने खर्च आफ्नो आर्थिक अबस्था कमजोर भएकाले दिन नसक्ने जनाए ।
ज्ञवालीको कान्छी श्रीमतिको रुपमा रहेकी भनिएकी रमा पन्थी
अहिले जेठी श्रीमतिले जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा ज्ञवाली विरुद्ध बहु बिबाहको मुद्धा दायर गरेकी छन् ,जसमाथि फैसला हुन बाँकी छ ।
ज्ञवाली एण्ड एसोसिएट् नामक आफ्नै अडिट फर्मबाट तलव भत्ता नबुझेको कीर्ते कागज तयार पारी साथै डिल्ली बजार कन्या क्याम्पसबाट राजीनामा दिए पछि बेरोजगार भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठडमाण्डौंबाट फैसला भए अनुसार मासिक १५ हजार रुपैया मानाचामल स्वरुप दिनु पर्ने रकम नै हालसम्म दिएका छैनन् ।
तर उनले कान्छी श्रीमति रमासगँ बैंकमा सयुक्त खाता खोली पैसा जम्मा गर्ने र निकाल्ने गरेको देखिएको छ । जनता बैंकको खाता नं०१४१०७०११८०२४०१ मा ज्ञवालीले पटक पटक पैसा झिक्ने र राख्ने गरेको भेटिएको छ । रमाको नाममा रहेको खातामा ७ लाख भन्दा बढी रकम मौजाद रहेको देखिएको छ ।
रमाको नाममा रहेको बैंक खाताकबाट ज्ञवालीले रकम राख्ने र झिक्ने गरेको विवरण देखिने बैंक स्टेटमेन्ट
यता जेठी श्रीमति देवी भने दिनै पिच्छे बच्चा हेर्न र अदालतको ढोकामा दौडधुपमा ब्यस्त छिन् । उनले आफ्नो न्यायका लागि निरन्तर सबैतिर आवाज समेत उठाउदै आएकी छन् । अदालतले ज्ञवालीले दिएको डिभोर्सकै मुद्धाको समेत विपक्षमा फैसला गरीसकेको छ । अब बहुबिबाहको मुद्धा भने फैसला हुन बाकी छ । २०७३ साल जेष्ठ १४ गते देवीले दायर ज्ञवाली विरुद्ध मुद्धा दायर गरेकी हुन् ।
शुरुमा ज्ञवालीले आफूलाई श्रीमति देवीले शारीरीक तथा मानसिक यातना दिने गरेको जस्ता कारण देखाउदै सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्धा २०६८ साल असार ५ गते दायर गरेका थिए । तर उनको दावी प्रमाणित हुन नसकेकाले अदालतले उनको विपक्षमा २०७० साल फागुण २९ गते फैसला गर्दै सम्बन्ध बिच्छेद रोकेको थियो ।
उनले विभिन्न पत्रिकामा आफैले टिप्पणी लेखेर श्रीमतिले पिट्ने गरेको, रक्सी खाने गरेको जस्ता आरोप लगाए पनि देवी स्वयंको टाउकोमा बियरको बोतलले हानेको चोट र हातको औला भाच्चिने गरी पिटेको दृष्य रुदै सार्वजनिक कार्यक्रममै सुनाएकी थिईन् । २०७० साल भदौं २ गते एक वर्ष पुरानो फैसला उल्टाउदै जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले ज्ञवालीले घरेलु हिंशा गरेको ठहर गर्दै १० हजार जरीवाना र एक महिना कैदको फैसला गरेको थियो । तर ज्ञवालीले अदालतको आदेश बमोजिम अझै कैद सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।
देवी अहिले दिनका दिन न्यायका लागि भन्दै मुद्धा लड्दै हिडिरहेकी छन् । हाम्रो समाजमा देवी जस्ता धेरै महिलाहरु पीडित छन् तर न्याय पाउन उनीहरुका लागि सजिलो उपाय देखिदैन ।
यसमा राज्य र न्यायप्रणाली सबल बन्नु पर्ने तर्क यस क्षेत्रमा कार्यरत अभियान्ताहरुको रहेको छ ।